ထိုင်းနိုင်ငံမှာလူကြိုက်အရမ်းများနေတဲ့ 6cm block အူရှင်း/အဆီကျဆေး | Myanmar Free Ads ' : ''; var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]; var day = postdate.split("-").substring(0,2); var m = postdate.split("-"); var y = postdate.split("-"); for(var u2=0;u2
Home / Diet & Slim / Medicine / ထိုင်းနိုင်ငံမှာလူကြိုက်အရမ်းများနေတဲ့ 6cm block အူရှင်း/အဆီကျဆေး
ထိုင်းနိုင်ငံမှာလူကြိုက်အရမ်းများနေတဲ့ 6cm block အူရှင်း/အဆီကျဆေး
Maung Pauk 7:30 AM Diet & Slim , Medicine
အဆီပိုတွေကို နေ့စဉ်စွန့်တဲ့မစင်နှင့်အတူပါသွားစေပီး ဆိုးကျိူးမရှိပဲ အမှန်တကယ် အဆီကျလှပစေပါတယ်..
မူလပထမဖန်ခွက်အတွင်းကရေဟာ ထည့်သွင်းလိုက်တဲ့ အဆီဓာတ်တွေနဲ့အတူ နောက်ကျိပေကျံနေပြီး 6cm block ဆေးလေးက ပြန့်ကျဲနေသောအဆီတွေကို တနေရာထဲစုပ်ယူစုစည်းပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ရေအကြည်ရောင်လေးပြန်ဖြစ်သွားတာကို အံဩစရာကောင်းလောက်အောင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်..
အလားတူပါပဲ.. နေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့အစားစာတွေမှာ အဆီဓာတ်များစွာပါဝင်ပါတယ်
ဒီဆေးလေးအစွမ်းက ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကပြန့်ကျဲနေတဲ့အဆီတွေကို တနေရာထဲစုပ်ယူစုစည်းပေးကာ ဝမ်းသွားအခါတိုင်း စွန့်ထုတ်စေပါတယ်
💥မနက်အစာမစားခင် ၁၅မိနစ်အလို သောက်ပေးပါ
💥အဆီပိုတွေ လုံးဝ ကျစေပါတယ်
💥ထိုင်း/လာအို/မလေးနိုင်ငံတွေထိ ကျော်ကြားပြီး လူကြိုက်များနေတဲ့ 6cm
🚫မှတ်ချက် ကိုယ်တွင်းမှ မလိုအပ်တဲ့အဆီအဆိပ်တွေကို သဘာဝအတိုင်း စုပ်ယူဖယ်ရှားပေးမှာဖြစ်လို့ နေ့ချင်းညချင်းတွေဝိတ်မကျသွားပါဖူးနော်
အူရှင်း-အဆီစုပ်ဆေးဖြစ်လို့ ဝမ်းများများသွားသည့်အခါမျိုးရှိမည်ဖြစ်၍ စိတ်ပူရန်မလိုပါ ✌ ✌ ✌
အဆီလည်းကျမယ် ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လေးကျစ်လျစ်ပီး အသားရေလည်းဖြူဝင်းစေမယ်နော်
💁🏼၂ပတ်အတွင်း သိသိသာသာထူးခြားမယ့်ဆေးပါ 💊
၂ပတ်အတွင်း အဆီကျ ကျစ်လျစ်လှပါမယ်
swisspharma ကုမဏ္ဏီမှထုတ်လုပ်သော GMPလက်မှတ်/FDAရရှိပြီးဖြစ်တဲ့ဆေးပါ
6cm အဆီကျ အသားကျစ် အသားဖြူဆေးကို ခန္ဓာကိုယ်အတွက် နေ့စဉ် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော Vitamins,ပဲ,ပင်လယ်ငါး,ရှားစောင်း, သဘာဝအသီးရွက်များကိုအဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့်အတူ အချိုးကျစွာ ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်
ခန္ဓာကိုယ်ကျစ်လျစ်လှပအောင် ထိန်းပေးခြင်းတို့ကြောင့် ဆိုးကျိူးမရှိပဲ အသားရေလှပီး ဖြူပီး အဆီကျစေဖို့ အာမခံပါတယ်..
ဈေးနှုန်းက 18000 Ks ဖြစ်ပြီး Ph - 09451689031. 09787179972 ကိုဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်..
အဆီပိုတှကေို နစေ့ဉျစှနျ့တဲ့မစငျနှငျ့အတူပါသှားစပေီး ဆိုးကြိူးမရှိပဲ အမှနျတကယျ အဆီကလြှပစပေါတယျ..
မူလပထမဖနျခှကျအတှငျးကရဟော ထညျ့သှငျးလိုကျတဲ့ အဆီဓာတျတှနေဲ့အတူ နောကျကြိပကြေံနပွေီး 6cm block ဆေးလေးက ပွနျ့ကြဲနသေောအဆီတှကေို တနရောထဲစုပျယူစုစညျးပေးလိုကျတဲ့အခါမှာတော့ ရအေကွညျရောငျလေးပွနျဖွဈသှားတာကို အံဩစရာကောငျးလောကျအောငျတှရေ့ပါလိမျ့မယျ..
အလားတူပါပဲ.. နစေ့ဉျစားသုံးနတေဲ့အစားစာတှမှော အဆီဓာတျမြားစှာပါဝငျပါတယျ
ဒီဆေးလေးအစှမျးက ခန်ဓာကိုယျအတှငျးကပွနျ့ကြဲနတေဲ့အဆီတှကေို တနရောထဲစုပျယူစုစညျးပေးကာ ဝမျးသှားအခါတိုငျး စှနျ့ထုတျစပေါတယျ
💥မနကျအစာမစားခငျ ၁၅မိနဈအလို သောကျပေးပါ
💥အဆီပိုတှေ လုံးဝ ကစြပေါတယျ
💥ထိုငျး/လာအို/မလေးနိုငျငံတှထေိ ကြျောကွားပွီး လူကွိုကျမြားနတေဲ့ 6cm
🚫မှတျခကျြ ကိုယျတှငျးမှ မလိုအပျတဲ့အဆီအဆိပျတှကေို သဘာဝအတိုငျး စုပျယူဖယျရှားပေးမှာဖွဈလို့ နခေ့ငျြးညခငျြးတှဝေိတျမကသြှားပါဖူးနျော
အူရှငျး-အဆီစုပျဆေးဖွဈလို့ ဝမျးမြားမြားသှားသညျ့အခါမြိုးရှိမညျဖွဈ၍ စိတျပူရနျမလိုပါ ✌ ✌ ✌
အဆီလညျးကမြယျ ကိုယျခန်ဓာကိုယျလေးကဈြလဈြပီး အသားရလေညျးဖွူဝငျးစမေယျနျော
💁🏼၂ပတျအတှငျး သိသိသာသာထူးခွားမယျ့ဆေးပါ 💊
၂ပတျအတှငျး အဆီကြ ကဈြလဈြလှပါမယျ
swisspharma ကုမဏ်ဏီမှထုတျလုပျသော GMPလကျမှတျ/FDAရရှိပွီးဖွဈတဲ့ဆေးပါ
6cm အဆီကြ အသားကဈြ အသားဖွူဆေးကို ခန်ဓာကိုယျအတှကျ နစေ့ဉျ မရှိမဖွဈ လိုအပျသော Vitamins,ပဲ,ပငျလယျငါး,ရှားစောငျး, သဘာဝအသီးရှကျမြားကိုအဆငျ့မွငျ့နညျးပညာနှငျ့အတူ အခြိုးကစြှာ ပေါငျးစပျထုတျလုပျထားခွငျး ဖွဈပါတယျ
ခန်ဓာကိုယျကဈြလဈြလှပအောငျ ထိနျးပေးခွငျးတို့ကွောငျ့ ဆိုးကြိူးမရှိပဲ အသားရလှေပီး ဖွူပီး အဆီကစြဖေို့ အာမခံပါတယျ..
စြေးနှုနျးက 18000 Ks ဖွဈပွီး Ph - 09451689031. 09787179972 ကိုဆကျသှယျဝယျယူနိုငျပါတယျ..